AH: September 2012
Posted by AH at 9/29/2012 09:30:00 PM 8 comments
ပန်းသီးနဲ့ ဆမ်းဆောင်း တရားစွဲ၊ ဟိုဘက်ကစွဲလိုက် ဒီဘက်က စွဲလိုက်နဲ့ မရိုးနိုင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းပေါ့။ ဒါပေမယ့် ထူးထူးခြားခြား ဒီနေ့ သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရတော့ တော်တော်လေး ရယ်ချင်သွားတယ်။ ဟောင်ကောင် အခြေစိုက် Goophone ဆိုတဲ့ ဖုန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဟာ apple က အသစ်ထွက်မယ့် iPhone5နမူနာကို apple က တရားဝင် မဖြန့်ချီခင်မှာ ရရှိသွားပြီး၊ iPhone5အခွံအတိုင်း ပုံတူပွားပြီးတော့ Android os သွင်းပြီး ဈေးကွက်ကို ဖြန့်ချီပြီးနေပါပြီတဲ့။ ဒါ့ကြောင့် apple ကသာ iPhone5ကိုဈေးကွက်ထဲကို ဖြန့်မယ်ဆိုရင် သူတို့ ဖုန်းဟာ ဈေးကွက်ထဲကို အရင်ရောက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ အတွက် ပန်းသီးကို ပုံစံတူ ကူးမှု့နဲ့ ပြန်ပြီးတော့ တရားစွဲမယ်လို့ ဆိုပါသတဲ့။ သြော်…. သူခိုးက လူပြန်ဟစ်တယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးမှ အဟုတ်။ ဘာ… ဘာ… ဘာမှ မပြောလိုတော့ပါဘူး။
Posted by AH at 9/27/2012 09:15:00 AM 10 comments
Posted by AH at 9/20/2012 01:01:00 PM6comments
C သုံးလုံးဆိုတာ နေရာတိုင်းမှာ တွေ့ရသည့် ဒုက္ခ။ အထူးသဖြင့် သင်္ဘောကျင်းတွေမှာ။ အရင်တုန်းကတော့ သင်္ဘောကျင်းမှာ ကိုယ်ကသင်္ဘောဆောက်ပေးသူ။ အခု Owner Representative ပြောင်းလုပ်တော့ ၀ဋ်ပြန်လည်တာပဲ။ တစ်ကမ္ဘာလုံး ဘယ် သင်္ဘောကျင်းသွားသွား ဒီ C ၃ လုံးပြဿနာကတော့ ရှိမြဲ။ C သုံးလုံးဆိုတာက ရယ်စရာမောစရာလိုမျိုး ပြောတတ်ကြတာ။ ဒါပေမယ့် ပြဿနာကတော့ မသေးလှ။ Specification, new building contract, ITP (Inspection and Test Plan)၊ Yard Standard ဒါတွေအားလုံးဟာ သင်္ဘော မဆောက်ခင်ကထည်းက သင်္ဘောကျင်းနဲ့ သင်္ဘောအပ်နှံသူကြားထဲမှာ ရှိရမယ့် မရှိမဖြစ် သဘောတူညီမှု့တွေ။ သင်္ဘောစဆောက်တာနဲ့ ဒီသဘောတူညီမှု့အတိုင်း တည်ဆောက်မှု့ အဆင့်အဆင့်ရဲ့ အဆင့်တိုင်းကို သွားရမှာ။ အဆင့်တိုင်းရဲ့ တည်ဆောက်မှု့တွေကို Classification society က သူ့ကြည့်ရမယ့် အပိုင်းကို လိုက်ကြည့်၊ owner ကတော့ အကုန်လုံးလိုလိုကို လိုက်ကြည့်။ သံပြားဖြတ်တာကစလို့၊ သံပြားတွေ ဂဟေဆော်ဆက်၊ သင်္ဘောပုံစံပေါ်၊ ပန်ကာတွေ ဆင်၊ အင်ဂျင်တွေထိုင်၊ လျှပ်စစ်ကြိုးသွယ်… ဘာညာ အကုန်လုံးဆိုပါတော့လေ။ ဒီတော့ သင်္ဘောကျင်းဆိုတာကလည်း မ တစ်ရာ သားသမီးတွေကို အုပ်ချုပ်ရတဲ့ အဖွဲ့အစည်း၊ ဒီကြားထဲမှာ Management က ဖွတ်ဖြစ်နေရင် ဒီ မ တစ်ရာ သားသမီးတွေက သင်္ဘောကို လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်ကုန်ကြရော။ ဒါကိုမှ သင်္ဘောကျင်းက မထိန်းနိုင်ရင် ပြဿနာတွေက အဲ့ဒီ မတစ်ရာ သားသမီး လူတွေမှာ မဟုတ်တော့ပဲ သင်္ဘောကိုယ်တိုင်က ပြဿနာ အတုံးလိုက်ကြီး ဖြစ်သွားရော။ အဲ့ဒီတော့ စောစောက သင်္ဘောတူညီချက်တွေ အတိုင်း စစ်ဆေးတဲ့ အခါကျတော့ ပြဿနာက စသပေါ့လေ။
သင်္ဘောကျင်းတွေရဲ့ C သုံးလုံး ဥပဒေက Convince, Confuse and Cheat။ သင်္ဘောကျင်းတွေရဲ့ပထမဆုံး tactic C က convince။ စောစောက ပြောခဲ့တဲ့ Contract, specification, ITP, Yard Standard စတာတွေနဲ့ မညီတဲ့ quality issue တွေအကုန်လုံးနဲ့ပါတ်သတ်ပြီးတော့ သူတို့က convince (ဟုတ်ပါတယ်၊ မှန်ပါတယ်၊ ဖြစ်သင့်တယ်၊ ပြင်ပေးမယ်၊) ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့ စသပေါ့လေ၊ လုပ်တာက တစ်မျိုး မလုပ်တာက တစ်မျိုး.. မနက်ဖြန်များစွာရှိတယ် ဆိုတဲ့ ဒိုးလုံး သီချင်းလိုမျိုး မနက်ဖြန်တွေကို ရွှေ့ရင်း ရွှေ့ရင်းနဲ့ ပြဿနာလေးတွေ ပုံပုံလာပြီး ပြဿနာပုံ တော်တော်ကြီးလာ။ အဲ့.. နောက် နဲနဲ ပိုပြီး ပြဿနာကြီးလာရင်တော့ Confuse stage ကိုရောက်ရော။ ဒီအဆင့်ကျရင်တော့ သင်္ဘောကျင်းတွေက ငြင်းမယ်၊ေ၀၀ါးအောင်လုပ်မယ်၊ လမ်းကြောင်းပြောင်းမယ်၊ အပေးအယူတွေလာမယ်၊ စသည်အားဖြင့် ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းမယ်။ ဒီအဆင့်မှာလည်း ဘယ်လိုမှ လုပ်မရတော့ဘူးဆိုရင်တော့ Cheat အဆင့်ကို ရောက်သွားပြီ။ Cheating ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ သင်္ဘောရဲ့ quality ကို တိုက်ရိုက်ကို ထိတော့တာ။ ခိုးလုပ်မယ်၊ ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်၊ နွားမ ရွှံပိတ်လုပ်တော့မယ်။ ဒီလိုနဲ့ C သုံးလုံးက စတယ်။
Posted by AH at 9/19/2012 12:31:00 PM 1 comments
သိပ္ပံကားတွေထဲမှာ မျက်မှန်တစ်လက်ထဲမှာ မက်ဆေ့ခ်ျရိုက်၊ သတင်းအချက်အလက်တွေ ပြ၊ ဖုန်းခေါ် ဒါတွေကို တွေ့ဖူးမှာပေါ့။ ခုတော့ အပြင်မှာ နောက်နှစ်လောက်ဆိုရင် မြင်ရနိုင်ဖွယ်ရှိလာပါပြီ။ Google ကတော့ သူ့ရဲ့ proto type ဂူဂဲလ်မျက်မှန်ကို အိုင်ဖုန်း ၅ မထုတ်ခင် တစ်ရက်က ဖက်ရှင်ရှိုးတစ်ခုမှာ ထုတ်ပြသွားပါတယ်။ ဒီ မျက်မှန်မှာ ဘာပါမလဲ? မျက်မှန်ကိုင်းထဲမှာ memory, processor, camera, speaker and micro phone, bluetooth and wi-fi antenna စတာတွေ ပါဝင်ပါမတဲ့။ မျက်မှန်ရဲ့ ညာဘက်ထောင့်အပေါ်နားလေးမှာ screen သေးသေးလေးပါဝင်ပါတယ်။ ဒီမျက်မှန် တပ်ထားလိုက်ရင် cellular radio ကနေတစ်ဆင့် အွန်လိုင်းချိတ်ပြီးရင် wireless နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကိုချိတ်၊ ဒီလိုဆိုရင် ဟန်းဖုန်းတွေလိုပဲ ဖုန်းဆက်လို့ရမယ်၊ မက်ဆေ့ခ်ျပို့လို့ရမယ်၊ GPS နဲ့သွားချင်တဲ့ နေရာကို ရှာလို့ရမယ်၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ ချက်ချင်း Google+ မှာ ရှဲလို့ရမယ်၊ face to face video call ပါမယ်။ ဒီတော့ မျက်မှန်တစ်လက်တပ်လိုက်ရင် ကွန်ပျူတာ အသေးလေးတစ်လုံး ကိုယ့်ရှေ့ရောက်နေသလိုပဲ…. ဘာခလုပ်မှ နှိပ်စရာမလို၊ voice command အသံနဲ့ ထိန်း။ ဟုတ်တော့ ဟုတ်နေတာပဲ။ ဟောဒီက YouTube Video မှာ ဒီမျက်မှန် ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Posted by AH at 9/17/2012 05:12:00 PM3comments
Posted by AH at 9/13/2012 09:57:00 PM 10 comments
Posted by AH at 9/12/2012 09:39:00 PM4comments
“ရေမြေခြားသွားရတော့… မင်းလေးကို ထားခဲ့ရပြီပေါ့… မျက်ကွယ်ရာမှာ ကိုစိတ်ချပါရစေ….” တစ်နယ်စီဝေး၊ အလွမ်းတွေဝေ၊ ချစ်သူတွေဘ၀ မတွေ့ရလို့လွမ်း ချစ်အနမ်းလေးတွေ ဝေးနေတဲ့ ချစ်သူများတွေကတော့ ဂျီတော့၊ ဗီဇက်အို၊ စကိုက်ပီ၊ ဖဘ တို့စတဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာပဲ အလွမ်းဖြေရတာပေါ့။ အခုတော့ တစ်မူထူးလို့ အသစ်တစ်မျိုး ထပ်ပေါ်လာပါပြီ။ အဲ့ဒါကတော့ “Kissenger” ပါတဲ့။ ချစ်သူတွေအွန်လိုင်းကနေ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး အနမ်းတွေ ချွေနိုင်မယ့် စက်ကလေးပါတဲ့။ ဒီစက်မှာပါတဲ့ sensor က တစ်ဖက်က ချစ်သူရဲ့ အနမ်းခြွေလိုက်တဲ့အခါမှာ နှုတ်ခမ်းရဲ့ ဖိအားအတိုင်း တစ်ဖက်ကို ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါသတဲ့။ အဲ…. ရည်းစားမရှိတဲ့ လူပျိုကြီးများဒါလေးကို ဖတ်မိလို့ အားငယ်မသွားပါနဲ့ဦး.... နမ်းစရာချစ်သူမရှိရင်.. အဲ့ဒီစက်ကလေးမှာ ကွန်ပျူတာနဲ့ နမ်းလို့ရအောင်လည်း ဖန်တီးပေးထားပါသေးတယ်လို့ အနမ်းခြွေတဲ့ စက်ထုတ်လုပ်တဲ့ ထုတ်လုပ်တဲ့ Lovotics ကုမ္ပဏီက ဆိုထားပါသေးသဗျား။ ကဲ စက်ကလေး ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာကို YouTube ကနေကြည့်နိုင်ပါသဗျား။
Posted by AH at 9/11/2012 09:06:00 AM 8 comments
ဒီနေ့ ဗူးလေးတစ်ဗူး လက်ဆောင်ရတယ်။ ဘာလဲလို့မေးလိုက်တော့ သားလေးမွေးလို့တဲ့။ သားဦးမွေးလို့ မင်္ဂလာသတင်းပါးရင်း လက်ဆောင်လာပေးတာပါတဲ့။ ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ကြက်ဥနှစ်လုံး ထွက်လာတယ်။ ချောကလက် နှစ်ခုထွက်လာတယ်။ ဘေးနားက တရုတ်ကို ရှင်းပြခိုင်းတော့မှ သူတို့ ဓလေ့မှာ ရင်သွေးရတနာ မွေးဖွားသန့်စင်ရင် သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေကို ကြက်ဥဝေပါသတဲ့။ ချောကလက်ကရောဆိုတော့ ချောကလက်က ယောက်ျားလေးမွေးရင် ထည့်ပေးပြီးတော့ မိန်းကလေးဆိုရင်တော့ ချောကလက် မထည့်ပါဘူးတဲ့။ ဒီလိုနဲ့ အင်တာနက်မှာရှာကြည့်လိုက်တော့ ကြက်ဥနီနီနဲ့ ဂျင်းအကြောင်းသွားတွေ့တယ်။ ကလေး တစ်လပြည့်တာနဲ့ ကြက်ဥနီနဲ့ ဂျင်းပွဲတော်လုပ်ပါသေးသတဲ့။ ကြက်ဥနီနီမှာ အနီရောင်ကတော့ ပျော်ရွှင်မှု့ကို ကိုယ်စားပြုပြီးတော့ ကြက်ဥကတော့ အဟာရဖြစ်စေဖို့၊ ကျန်းမာသန်စွမ်းဖို့ စသည် စသည် သဘောအားဖြင့် ကျွေးပါသတဲ့။ အင်း ကလေးမကျွေးပဲ ဘယ့်နှယ် လာတဲ့လူတွေ ကျွေးနေသလဲတော့ မသိ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ ကြက်ဥနှစ်လုံးကတော့ သောင်တင်နေသည်။ အရင်တုန်းကတော့ ကြက်ဥကို ဆိုးဆေးအနီသုတ်ပြီး ပြုတ်သည်ဟုဆိုသည်။ ခုတော့ ကြက်ဥက ဘာရောင်မှန်းမသိ။ မင်္ဂလာသတင်းအတွက်စားရင်း ဘယ်နှစ်ဘယ်ကာလကထဲက ပါကင်ထုတ်ထားမှန်းမသိတဲ့ ကြက်ဥကို စားမိပြီး အမင်္ဂလာဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ ရဲရဲ မစားရဲ။ စားရင်ကောင်းမလား၊ လွှတ်ပစ်ရင်ကောင်းမလား စဉ်းစားနေတုန်း…..
Posted by AH at 9/10/2012 05:23:00 PM5comments
Posted by AH at 9/09/2012 11:00:00 AM5comments
Posted by AH at 9/08/2012 08:00:00 AM3comments
Posted by AH at 9/06/2012 09:41:00 PM4comments
ဒီနေ့ ကြည့်လိုက်တော့ ဘလော့ဂ်မှာ ကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ 99counters ဆိုတဲ့ traffic counter မှာ upgraded လုပ်ထားပါကြောင်း၊ embed code အသစ်ကို သူ့ဆိုဒ်မှာ သွားယူပါဆိုတဲ့ ဟာပေါ်လာရော။
Posted by AH at 9/06/2012 05:23:00 PM0comments
ဖဘ မှာတွေ့တဲ့ ဒီဓာတ်ပုံလေးကြည့်ပြီးတော့ ရေးချင်စိတ်ပေါက်လာတော့ ရေးချလိုက်မိတယ်။ ကျွန်တော်ထင်တာ ကျွန်တော်ကြိုက်တာ ကျွန်တော်ဟာ ကျွန်တော်ရေးတော့ မှန်ချင်မှလည်း မှန်ပေလိမ့်မပေါ့။ လူတိုင်း ကိုယ့်အကြိုက်နဲ့ ကိုယ်ပဲကို။ ဒါပေမယ့်လည်း ရေးချင်လာတော့ မတတ်နိုင် ရေးမိသည်။ ပထမ အချက်က ကြိုးနီနီလေးများအကြောင်းကို ရေးချင်မိသည်။ ကျွန်တော့်အလုပ်နဲ့ပါတ်သတ်ပြီး လျှောက်သွားဖြစ်သည်။ ရောက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာ တွေ့တာလေးတွေ မြင်တာလေးတွေ ကြည့်ပြီးတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့ ယှဉ်ကြည့်ဖြစ်သည်။ ဘာတွေ တွေ့လည်းဆိုတော့ ကြိုးနီနီလေးတွေ တွေ့သည်။ ဘာကြောင့် ကြိုးနီနေတုန်းလဲ၊ ကြိုးနီတွေ အရမ်းတင်းနေလဲ ဆိုတာကို တွေးဖြစ်သည်။ ကြိုးနီဆိုတာ ဗဟိုမှ ချုပ်ကိုင်မှု့အရမ်းတင်းလွန်းတဲ့ နိုင်ငံတွေဖြစ်သည်။ အရာရာကို ချုပ်ကိုင်သည်။ ဗဟိုကနေပြီးတော့ ၀န်ကြီးဋ္ဌာတွေပေါ် ချုပ်ကိုင်မှု့ အရမ်းတင်းသည်။ ၀န်ကြီးဋ္ဌာနတွေအားလုံးကနေပြီးတော့ ဋ္ဌာနခွဲအသေးလေးတွေအပေါ်မှာ ချုပ်ကိုင်လွန်းအားကြီးသည်။ ဋ္ဌာနခွဲလေးတွေရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်က ဘာမှမရှိတော့။ သူတို့အစိုးရက စိုးရိမ်သည်။ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေက ပြည်သူတွေကို ၀ါးသွားမှာ၊ ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ လျှော့လာမှာ စိုးရိမ်သည်။ ဒါပေမယ့် ပြည်တွင်းမှာ ဘာတွေထုတ်နေလဲ ဆိုတာကို နံပါတ်တစ် စဉ်းစားစရာဖြစ်သည်။ ကိုယ့်နိုင်ငံက ကားထုတ်လား၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ထုတ်လား၊ သင်္ဘောတွေ အများကြီးဆောက်နေလား၊ စက်မှု့လုပ်ငန်းနဲ့ပါတ်သတ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းပစ္စည်းတွေထုတ်နေလား၊ ဒါတွေကို ပြည်ပကို တင်ပို့ရောင်းချနေလား? စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနဲ့ ပါတ်သတ်တဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို နိုင်ငံတစ်ကာ အဆင့်မှီ အရည်သွေးပြည့် ဒေါင်ဒေါင်မည်နဲ့ ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေက ထုတ်လုပ်တင်ပို့နေတာလား၊ ပြည်တွင်းကို ဖြန့်ဖြူးနေတာလား၊ ဒါမှမဟုတ် ပြန်ဖန်တီးယူလို့မရတော့တဲ့ သယံဇာတတွေကို ထုတ်ရောင်းနေတာလား? စသည် စသည်။
ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် နိုင်ငံခြားက ငွေလုံးငွေရင်းဝင်ရောက်ခြယ်လှယ်နိုင်တဲ့ ရေလုပ်ငန်းလို၊ သစ်လုပ်ငန်းလိုမျိုး နေရာတွေမှာတော့ ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကို ငဲ့ရမည်။ သို့ပေမယ့် ခရိုနီတွေကိုပဲ ဇောင်းပေးထားတဲ့ ဥပဒေမျိုးကိုတော့ မဆိုလို။ ခရိုနီတွေက ရေနံ၊ သစ် စတဲ့ သဘာဝ သယံဇာတတွေအပေါ်မှာ ထိုင်ပြီးတော့ အဆီရစ်နေတာမျိုးကို ဒီတိုင်းကြည့်မနေသင့်။ သူတို့မှာ စုဆောင်းမိလာတဲ့ ငွေပင်ငွေရင်းတွေကို ကျစ်ယူပြီးတော့ စက်မှု့နဲ့ ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှု့အတွက် လိုအပ်တဲ့ infrastructure တွေဆီကို ရွှေ့ပြောင်းပစ်ရမည်၊ ဒီ infrastructure တွေကို Public listed အသွင်ပြောင်းပြီး ခရိုနီတွေလက်ထဲကနေ Share အသွင်နဲ့ ပြည်သူတွေပါ ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်လာအောင် ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းယူရမည်။ ဒီလိုနှင့် ခရိုနီတွေရဲ့ ပြည်တွင်း လက်ဝါးကြီးအုပ်မှု့ကို အသေးစားနှင့် အလတ်စား လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် ပါအခွင့်အရေးရလာအောင် တဖြည်းဖြည်းချင်း လွှဲပေးနိုင်မည့် အစိုးရကို လိုအပ်သည်။ ဒီအတွက် ဥပဒေကလည်း မားမားမတ်မတ်၊ တိတိကျကျ ရပ်တည်ရမည်။ ဒီတော့မှ နိုင်ငံကိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအတွက် နေရာထိုင်ခင်းရလာမည်။ နိုင်ငံထုတ်ကုန်များလာပြီးတော့ စီးပွားရေး ဦးမော့လာမည်။ စက်မှု့လုပ်ငန်း၊ နည်းပညာနဲ့ ပါတ်သတ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာတော့ ကိုယ့်မှာ လူ့အရင်းအမြစ်၊ ပညာအရင်းအမြစ်မလုံလောက်လျှင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ခေါ်သွင်းရမည်။ ပြည်သူတွေအတွက် အလုပ်ဖန်တီးပေးဖို့လိုသည်၊ ၀င်ငွေရရှိဖို့လိုသည်။ ပြည်ပက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ ၀င်လာရင် မဖြစ်မနေ ပြင်ဖို့လိုအပ်တာက သွင်းကုန်၊ ထုတ်ကုန်နှင့် အကောက်ခွန်စနစ်က အဓိကဖြစ်သည်။ ခက်သည်က ကြိုးနီက တင်းလွန်းသည်၊ ဒါပေမယ့် ကြိုးနီနီမှာ ခြတွေက အဖွေးသား။ ဒီလိုဆိုလျှင် တစ်ခြားနိုင်ငံကရော၊ ပြည်တွင်းကပါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည်သူတွေ အတွက်အတော့်ကို ကသိ ကအောက်ရောက်မည့် ကိစ္စ။ ထုတ်ကုန်လေးတစ်ခု နိုင်ငံထဲက ထွက်ဖို့အတွက် ခြတွေကို ကျွေးလိုက်မွေးလိုက်၊ လိုတဲ့ ပစ္စည်းလေးမှာဖို့အတွက် ခြတွေကို ကျွေးလိုက်မွေးလိုက်နဲ့ဆိုလျှင် လုပ်ငန်းဘယ်တော့မှ မတွင်၊ ကုန်စည်ရဲ့ အ၀င်၊အထွက် စီးကြောင်းက ဥပဒေအတိုင်းမသွားပဲ ခြတွေရဲ့ လက်ထဲမှာ Bottle Neck ဖြစ်ကုန်တော့မည်။ အင်ဒိုမှာလည်း ဒါမျိုးတွေက ရှိနေတုန်း။ ဒီတော့ လာတော့ လာချင်ပါရဲ့၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံချင်ပါရဲ့၊ သို့ပေမယ့် ကြိုးနီနီနဲ့ ခြကြောက်တယ်ဆိုတယ် သံသရာ တစ်ပတ်ပြန်လည်လိမ့်မည်။ ခံရမည်မှာ အောက်ခြေ ပြည်သူများသာဖြစ်သည်။
Posted by AH at 9/06/2012 11:46:00 AM0comments
ငါးတစ်ကောင်ကို ယွမ် ၃သန်းနဲ့ ပွပေါက်တိုးသွားတဲ့ တံငါသည်
ငါးတစ်ကောင်ကို ဘယ်လောက်ဈေးရမယ်ထင်ပါသလဲ? တရုတ်နိုင်ငံက တံငါသည်တစ်ယောက်ကတော့ Chinese Bahaba လို့ခေါ်တဲ့ ဧရာမ အ၀ါရောင်း ငါးပုတ်သင်ကြီးတစ်ကောင်ကို ဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။ ဒီ ငါးပုတ်သင်ကြီးကို လေလံတင်ပြီးရောင်းလိုက်တာ ယွမ် ၃ သန်းကျော်တောင် ရလိုက်ပါသတဲ့။ မြန်မာငွေနဲ့ တွက်လိုရင် သိန်း ၄ထောင်ကျော်လောက်ရှိမှာပါ။ ဒီတရုတ် ငါးပုတ်သင် ငါးကြီးတွေဟာ ၆ ပေ ၇ လက်မအထိ ကြီးနိုင်ပြီးတော့ ပေါင် ၂၂၀လောက်အထိ အလေးချိန်စီးပါတယ်။ ဈေးကြီးရတဲ့ အကြောင်းကတော့ ဒီငါးတွေရဲ့ swim bladder လို့ခေါ်တဲ့ ငါးဆီဖောင်းဟာ နှလုံးနဲ့ အဆုတ်ရောဂါတွေအတွက် ဆေးဖော်ရာမှာ အလွန့်ကို အစွမ်းထက်တယ်လို့ တရုတ်လူမျိုးတွေက ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခုအချိန်မှာတော့ ဒီငါးတွေဟာ ယန်ဇီမြစ်ကနေပြီးတော့ ပုလဲမြစ်တစ်လျှောက် သဘာဝ ညစ်ညမ်းမှု့တွေကြောင့် မျိုးတုန်းလုဖြစ်နေပါပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ မှာတုန်းကလည်း ဒီလိုငါးကြီးဖမ်းမိခဲ့ဖူးပြီးတော့ အဲ့ဒီတုန်းက ယွမ် ၃.၄၅ သန်းနဲ့ အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်ပြည်ရောက်နေတုန်း သင်္ဘောမဆောက်ပဲနဲ့ ငါးလိုက်ဖမ်းရင်ကောင်းမလား စဉ်းစားရမလိုလိုတောင်ဖြစ်နေပြီ။
Posted by AH at 9/05/2012 07:28:00 PM4comments
လူရယ်လို့ ဖြစ်လာရင်တော့ ဘ၀မှာ ပြည့်စုံမှု့ကို လိုလားတောင့် ကြတာပဲ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေကျတော့ မပြည့်စုံမှု့တွေကို ဘ၀ပေး အခြေအနေလို့ ခံယူပြီး အဲ့ဒီခံယူချက်ထဲက ရုန်းထွက်ဖို့ မကြိုးစားကြဘူး။ ဟွမ်ဂိုဖူ ဆိုတဲ့ ပန်းချီဆရာကတော့ သူ့အသက် ၄နှစ်သားမှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်လိုက်ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ လက်နှစ်ဖက်စလုံးကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဟွမ်ဟာ သူ့ဘ၀ကို အရှုံးမပေးခဲ့ပါဘူး။ လက်နှစ်ဖက်မရှိပေမယ့် သူ့ဘ၀ရဲ့ အိပ်မက်ဖြစ်တဲ့ ပန်းချီဆရာဖြစ်ဖို့ကို ဆက်လက်အသက်သွင်းခဲ့တယ်။ အသက် ၁၂ နှစ်သားအရွယ်ရောက်တော့ သူဟာ ခြေထောက်နဲ့ ပန်းချီဆွဲနိုင်အောင် ကြိုးစားခဲ့တယ်။
အသက် ၁၈ နှစ်မှာ ဟွမ့် အဖေရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေဟာ အတော့်ကို ဆိုးဝါးခဲ့တယ်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ဟွမ်ဟာ သူ့အဖေဆေးကုသမှု့အတွက် လိုအပ်တဲ့ ငွေကိုရအောင် သူ့ဘ၀ကို တစ်ဆစ်ချိုးပြောင်းလဲခဲ့ရတယ်။ သူ့ပညာရေးကို ရပ်တန့်ခဲ့တယ်၊ မြို့တွေ တစ်မြို့ပြီး တစ်မြို့ကို လျှောက်သွားပြီးတော့ လမ်းဘေးမှာ ပန်းချီဆွဲပြီး လမ်းသွား လမ်းလာတွေကို သူ့ပန်းချီကားတွေ ရောင်းချလို့ ငွေရှာခဲ့ရတယ်။ ဒီလို ခရီးသွားလာရင်းနဲ့ သူဟာ ပါးစပ်မှာ စုပ်တံကိုကိုက်လို့ ပန်းချီဆွဲတတ်လာခဲ့တယ်။
ခုတော့ ဟွမ်ဟာ အသက် ၄၁ နှစ်အရွယ်ရောက်နေပါပြီ။ သူဟာ ချုန်ချင်းပြတိုက်ရဲ့ လက်ထောက် ပြတိုက်မှုးတစ်ယောက် ဖြစ်နေပါပြီ။ သူ့ရဲ့ လက်ရာမြောက်လှတဲ့ ပန်းချီကားတွေကို ပါးစပ်နဲရောက် ခြေထောက်နှင့်ပါ ရေးဆွဲပြီးတော့ နာမည်ကြီး ပန်းချီဆရာ တစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ သူ့ဟာ ပန်းချီပညာရပ်အနေနဲ့ရော၊ စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ရေးအတွက်ပါ ဆုတံဆိပ်ပေါင်းမြောက်များစွာ လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူ့လိုမျိုး မသန်မစွမ်းလူငယ်လေးတွေကို ပန်းချီဆွဲတတ်လာအောင် မြေတောင်မြှောက်ပေးနေပါတယ်။
“ဘ၀မှာ ခင်ဗျားတို့အတွက် တံခါးပေါက်တစ်ပေါက် ပိတ်နေတဲ့အခါ တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ ခင်ဗျားတို့ဟာ တစ်ခြား တံခါးပေါက်တစ်ပေါက်ကို ဖွင့်လှစ်နိုင်ရမယ်။ တစ်ကယ်တော့ ဘ၀မှာ မတွန်းလှန်နိုင်တဲ့ အခက်အခဲဆိုတာ မရှိဘူးဆိုတာကို မျိုးဆက်သစ်တွေကို ကျွန်တော်က သိစေချင်တာပါ။ အခက်အခဲဆိုတဲ့အရာကို ကျော်လွှားရမယ်၊ ဖြတ်သန်းရမယ်ဆိုတဲ ခံယူချက်ရှိရင် ဘ၀မှာ ဘာအခက်အခဲကိုမှ မှု့စရာမလိုပါဘူး” လို့ ဟွမ်က ဆိုပါတယ်။
Posted by AH at 9/04/2012 12:05:00 PM2comments
Labels: စကားစုလေးများ, ထူးခြားဆန်းပြား ကမ္ဘာတစ်လွှား
Posted by AH at 9/03/2012 11:32:00 PM3comments
ခုရက်ပိုင်း နားထောင်ဖြစ်နေတဲ့ သီချင်းလေးပါ...... Lလွန်းဝါနဲ့ Lဆိုင်းဇီ New version နဲ့ ပြန်ဆိုထားတဲ့ သီချင်းဟောင်းလေးပါ။
Posted by AH at 9/03/2012 11:48:00 AM3comments
ဒေါ်လာ ၁သန်းခွဲလောက် ဈေးရှိတဲ့ လဘော်ဂီနီပြိုင်ကားမျိုး သင်စီးချင်သလား? ဒေါ်လာတစ်သန်းခွဲမတတ်နိုင်ရင် ဘာလုပ်မလဲ? တရုတ်နိုင်ငံက အသက် ၂၈နှစ်ရှိတဲ့ ၀မ်ချန်ဆိုတဲ့ လူငယ်ကတော့ သူစီးချင်လှတဲ့ Lamborghini’s 2007 Reventon ကို ကိုယ်တိုင်လုပ်လိုက်ပါသတဲ့။ အဲ့ဒီ Lamborghini's 2007 Reventon ပြိုင်ကားဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ၂၁ စီးသာ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ပြိုင်ကားဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာတော့ သူ့ရဲ့ ကိုယ်တိုင်လုပ် ပြိုင်ကားဟာ မီးခွက်တွေ မှန်တွေ မပြီးစီးသေးပေမယ့် မောင်းလို့တော့ ရနေပါပြီတဲ့။ တစ်နာရီကို ကီလိုမီတာ ၂၅၀ နှုန်းအထိပါ မောင်းလို့ ရပါသတဲ့။ “ကျွန်တော်ဟာ ငယ်ငယ်လေးကထဲက ပြိုင်ကားတွေ လိုချင်ခဲ့တာပါ” လို့ ၀မ်က ပြောသွားပါသေးတယ်။ “ခု အရွယ်ရောက်လာတော့ ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ ပြိုင်ကားကို ကိုယ်တိုင်ဆောက်ဖို့ စိတ်ကူးရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အချိန်ရော၊ အခွင့်အရေးပါရလာတဲ့ တစ်နေ့မှာ ကျွန်တော့် အိပ်မက်ထဲက ပြိုင်ကားကို ကိုယ်တိုင် ဆောက်လိုက်တာပါ” လို့ ပြောသွားပါသေးတယ်။ ကဲ… ဘာမှလာမပြောနဲ့ ပါးစပ်ကြီး ဟပြီး ထိုင်တောင် ငိုသွားမယ်….
Posted by AH at 9/02/2012 08:09:00 AM2comments
Posted by AH at 9/01/2012 08:55:00 AM3comments